The Ab Presents Nepal » श्रीमतीले प्राण छाेडेकाे ३ घण्टामै श्रीमानको पनि गयाे प्राण, सबै अचिम्मित !
श्रीमतीले प्राण छाेडेकाे ३ घण्टामै श्रीमानको पनि गयाे प्राण, सबै अचिम्मित !
इटहरी -: श्रीमतीको प्राण गएकै दिन श्रीमानको पनि आफसेआफ प्राण गयाे भन्दा सबैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर इटहरीमा यस्तै अनौठो घट्ना घटेको छ । जुन घट्नाले इटहरी १३ खनारका स्थानीय अचम्बित भएका छन् ।
इटहरी १३ की ७८ बर्षिय नर्वदा भट्टराईले मङ्गलबार ८ बज्न १५ मिनेट बाँकी रहदा प्राण गयो । घर परिवारमा रुवाबासी हुँदाहुँदै नर्वदाको ८६ बर्षिय श्रीमान टिकाप्रसाद भट्टराईको हर्ट अ *ट्याक भएर प्राण गएको आफन्तले बताएका छन् ‘।
एकै परिवारमा अनौठो प्राण गएपछि गाउँलेहरु अचम्बित भएका छन् । स्थानीयले मृ *त्यु राम्रो भएको भन्दै खनार देखि इटहरीको बुढीखोलासम्म दुवै शबलाई परिक्रमा गदै एकै चितामा दाहसस्कार गरेको आफन्त विकास भट्टराईले बताए’ ।
एकै दिन अजुरबा अजुरआमाको मृ *त्यु भएको देख्दा लाग्यो अचम्म भयो विकास भन्छन् । यस्तो घट्ना कमै मात्र हुने गरेको भन्दै गाउँलेहरु अचम्बित बनेका छन । एउटै तिथिमा एकै परिवारको श्रीमान श्रीमतीको मृ *त्यु हनु अनौठो हो मलामी आएकाहरु भन्दै थिए । मुक्ति घाटमा एकै चितामा दुई शब जलाईयो’ ।